Acer Chromebook: Noocyada cusub ee buugaagta xusuusta ayaa rasmi ah | War gadget
IFA 2019 wuxuu ku bilaabmayaa Acer oo ah jilaa weyn. Shirkadda ayaa hadda dhammeysay shirkeedii jaraa'id ee ay nooga tageen warar badan. Waxyaabaha ay nooga tageen waxaa ka mid ah noocyadooda cusub ee laptop-ka Chromebook. Waxay nooga tagayaan wadar ahaan afar nooc oo ku jira (315, 314, 311 iyo Spin 311).
Kuwani waa afar laptop oo ku habboon ardayda, oo loogu talagalay in lagu siiyo waxqabadka ugu fiican mar walba. Naqshadeynta casriga ah, astaamaha wanaagsan iyo qiimaha weyn ee lacagtu waa furaha baaxadda Acer Chromebook. Marka waxay leeyihiin wax walba oo ka mid noqon kara kuwa ugu caansan qaybtaan.
Xadka waxaa loo qaybin karaa laba kooxood, oo leh laba nooc oo ah tallaabo kor ku xusan xagga cabbirka iyo waxqabadka. In kasta oo aan haysanno laba nooc oo kale oo cabbirkoodu yar yahay, laakiin taasi waxay haysaa astaamo aad u dhammaystiran oo loogu talagalay ardayda ka sarreeya dhammaan. Tani waa noocyada cusub ee noocyada 'Chromebook'.
1 Chromebook 315 iyo Chromebook 314: Moodooyinka calanka
2 Acer Chromebook Spin 311 iyo Chromebook 311: Moodooyinka Yaryar
Chromebook 315 iyo Chromebook 314: Moodooyinka calanka
Midka koowaad waa labada moodel oo leh cabbir ka ballaaran. Kuwani waa Chromebook 315 iyo Chromebook 314, kuwaas oo ah kuwa ugu waaweyn uguna awoodda badan gudaha. Kufiican shaqada iyo nasiinta waxqabad wanaagsan, in kasta oo waliba ay fiicantahay markay tahay daawashada waxyaabaha kujira warbaahinta badan, mahadnaqa shaashadahooda waaweyn iyo kuwa tayo leh. Marka way ka dhex muuqdaan inta u dhexeysa.
Chromebook 315 wuxuu leeyahay shaashad dhan 15,6-inji, halka Chromebook 314 uu leeyahay shaashad 14-inji ah. Labada xaaladoodba waxay leeyihiin qaraar buuxa oo HD ah (1920 x 1080 p) oo leh teknolojiyadda IPSii iyo xaglo daawasho ballaaran. Chromebook 315 sidoo kale waxaa ku jira nambar nambar qaas ah, oo ka dhigaya aalad aad u fiican dadka isticmaala iyo milkiileyaasha ganacsiyada yaryar.
Acer wuxuu ku siiyaa kiiska Chromebook 315 ikhtiyaarka ah dhexgeli processor Intel Pentium Silver N5000. Dhamaan noocyadu waxay adeegsadaan Intel Celeron N4000 dual-core ama N4100 quad-core sida processor-ka, laakiin qaabkani wuxuu leeyahay ikhtiyaar dheeri ah. Dhanka RAM iyo keydinta, 315 wuxuu leeyahay ilaa 8GB oo RAM ah iyo 128GB oo keyd ah eMMC. Xaaladda 314, waa 8 GB iyo 64 GB, siday u kala horreeyaan. Labada laptop waxay bixiyaan 12,5 saacadood oo ismaamul ah.
Acer Chromebook Spin 311 iyo Chromebook 311: Moodooyinka Yaryar
Qiyaasta buugaagta loo yaqaan 'Chromebooks' waxaa soo dhameystiray labadan laptop oo ah kuwa ugu yar cabir ahaan. Astaantu waxay nooga tagaysaa halka loo yaqaan 'Chromebook Spin 311 iyo 311', oo ah laba moodel oo aad u fudud isla markaana ku habboon in lagu qaado maalin walba markasta. Labadaba Waxay leeyihiin shaashado 11,6-inji ah. Acer Chromebook Spin 311 (CP311-2H) wuxuu leeyahay naqshad la beddeli karo oo ah 360-digrii, sidaas darteed 11,6-inji HD taabashada ah ayaa loo isticmaali karaa afar nooc oo kala duwan: kiniin, laptop, bandhig, iyo teendho.
Qaabka labaad ee noocani waa Chromebook 311, kaas oo cabirkiisu yahay 11,6-inji shaashad ah. Xaaladdeeda, waxay leedahay naqshad laptop-dhaqameed, waana mid aad u fudud, oo culeyskiisu ka yar yahay 1 kg. Marka way fududahay in la raro markasta. Laptop-kani wuxuu ku yimaadaa noocyada taabashada iyo kuwa aan taabashada ahayn. Labada laptop waxay na siinayaan 10 saacadood oo ismaamul ah.
Acer wuxuu na siiyaa ilaa 8 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah on the Chromebook Spin 311. Inta aad ku sugan tahay Chromebook 311 waxaad kala dooran kartaa illaa 4GB iyo 64GB, siday u kala horreeyaan. Intel Celeron N4000 dual-core ama N4100 quad-core ayaa loo isticmaalaa in lagu shaqeeyo kiiskan. Marka laga hadlayo isku xirnaanta, dhammaantood waxay leeyihiin laba USB 3.1 Nooca-C Gen 1 dekedo oo ay leeyihiin kamarad hore HD wicitaannada fiidiyowga.
Shirkadda Acer ayaa xaqiijisay in buugaagta loo yaqaan 'Chromebook' ay iibin doonaan dayrta, inta lagu jiro bisha Oktoobar. In kasta oo taariikhuhu ka duwanaan karaan hadba suuqa ay wax ka jiraan, haddana waxaan filan karnaa bishan. Shirkadda ayaa sidoo kale wadaagtay qiimaha mid kasta oo ka mid ah laptop-yadaas:
Chromebook 315 waxaa la heli doonaa laga bilaabo Oktoobar iyadoo lagu qiimeeyo 329 euro.
Chromebook 314 waxaa la bilaabi doonaa bisha Oktoobar iyadoo qiimahiisu yahay 299 euro.
Chromebook Spin 311 waxaa la heli doonaa laga bilaabo Oktoobar qiimo dhan 329 euro.
Acer Chromebook 311 waxaa la heli doonaa laga bilaabo Oktoobar qiimo dhan 249 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Kumbuyuutarro » Acer wuxuu soo bandhigayaa noocyadiisa cusub ee buugaagta xusuus-qorka ee Chromebook ee IFA 2019
Predator Triton 300: Acer laptop-kiisa cusub ee ciyaaraha